4G Soo noqnoqoshada: Helitaanka Taleefoonada casriga ah iyo Howl wadeenka Isku-dar - Talooyin - WAA KU SAMEEYAAN
ACCUEIL » QODOBO »4G Soo noqnoqoshada: Helitaanka taleefanka casriga iyo wadaha si sax ah - Talooyin
4G Soo noqnoqoshada: Helitaanka taleefanka casriga iyo wadaha si sax ah - Talooyin
Si aad runtii ugu raaxaysato 4G, waxaa lagama maarmaan ah in soo noqnoqoshada laga helo taleefanka casriga ay u dhigmaan kuwa ay adeegsadaan howl wadeenka xushay. Sharaxaad.
Inta la sugayo imaatinka 5G, oo ballan qaada dhammaan noocyada cajaa'ibyada leh ee leh xawaaraha ufiican fiber-ka, waa 4G kaas oo ay si wada jir ah u adeegsadaan hawl wadeenadayaasha si ay xog isweydaarsadaan mobilada, iyagoo si gaar ah u siinaya internetka, iyo dhammaan adeegyada khadka tooska ah.
Sheekooyinka soo noqnoqda
Kaliya, halkan, kuma filna inaad haysatid taleefan casri ah oo heer sare ah si looga faa’ideysto tikniyoolajiyadan. Xaqiiqdii, 4G LTE ee loo adeegsado Yurub wuxuu ku shaqeeyaa dhowr guutooyin soo noqnoqda (xamuulleyda, gudaha isgaadhsiinta isgaarsiinta). Faransiiska gudaheeda, shan guuto oo isdaba-joog ah waxaa oggolaanaya mas'uuliyiinta: B28 (700 MHz), B20 (800 MHz), B3 (1800 MHz), B1 (2100 MHz) iyo B7 (2600 MHz). Adigoon gelin faahfaahin farsamo, iyo si fudud, tirada isdaba-joogga ah ee la adeegsaday, ayay calaamaduhu si aad ah ugu sii socdaan oo ay sifiican uga gudbayaan derbiyada guryaha. Tani waa sababta ay hawl-wadeyaashu u adeegsanayeen guutooyinka B28 iyo B20 in muddo ah, si ay si sahlan ugu daboolaan miyiga.
Laakiin waxa muhiimka ah ayaan ahayn: dhab ahaantii, maahan dadka isticmaala inay doortaan baandooyinka la isticmaalay, laakiin hawl wadeenada. Dhammaantoodna ma wada leeyihiin mudnaano isku mid ah, sababayaal isku waqti farsamo, dhaqaale iyo taariikhi ah, sida aan ku arki karno shaxda hoose waxay soo koobeysaa tirada anteenooyinka '4G' ee adeegga gudaha Faransiiska iyadoo loo eegayo hawl wadeennada iyo soo noqnoqoshada. Sidaa darteed, Free Mobile waxay isticmaashaa seddex guuto oo kaliya shantii: aasaaska B3 t the B7, iyo B28 - waa xitaa midka ugu horumarsan ee soo noqnoqda - halka SFR ay ka faa’iideysato B3 iyo B20, waxyar ka yar B1 iyo B7, oo inta badan maaha B28.
Tirada anteenooyinka 4G ee loo adeegsado hawl wadeenada ka howlgala gudaha dalka faransiiska
(isha: ANFR - Ogast 2019)
Moobayl lacag la'aan ah 7 471	 0 12 261 0 12 565
Hubi waafaqidnimada taleefanka casriga ah
Or Dhamaan teleefoonada casriga ah ee loo yaqaan '4G' lama jaanqaadi karaan inta jeer ee ay socdaan. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay moodooyinka laga soo dhoofiyo Shiinaha, kuwaas oo had iyo jeer maareeya xadhkaha ugu sarreeya (B1, B3 iyo B7). Xaqiiqdii, magacyada waaweyn ayaa raacay isbeddelka isbeddelka jeermiska iyo ku dhawaad ​​dhammaan taleefannada casriga ah waxay maareeyaan shanta guutooyinka Faransiiska. Laakiin moodooyinka waaween, gaar ahaan kuwa laga helay suuqa gacan labaadka ah, waxay dhibaatooyin ku keeni karaan hawl wadeenada qaarkood. Sidaa daraadeed waa muhiim inaad la xiriirto taleefanka casriga ah iyo xiriiriyaha adiga oo hubinaya soo noqnoqoshada iswaafaqsan.
Tan darteed waan awoodnaa adeegso goob sida Kimovil, kaas oo u oggolaanaya inuu ogaado dhammaan astaamaha farsamada ee casriga kasta - xitaa moodooyin aad dhif u ah - oo sidaas darteed loo hubiyo iswaafajinta muruqyada.
Tusaale ahaan, Samsung Galaxy S9 - oo ah moodal heer sare ah oo dhowaan dhammaaday - wuxuu si wanaagsan u maaweeliyaa shanta 4G ee faransiiska, sidaa darteed Xiaomi Redmi 6A - oo ah heer guur dhowaan la soo galey - ayaa aqoonsan afar kaliya, sida Huawei P30 Lite. Waxay kuxirantahay howl wadeenka la xulay, waxaad fursad uheleysaa inaad uhesho 4G gabi ahaanba ama qeyb ahaan…
Ogow meesha ay ku yaalaan anteenooyinka '4G'
Intaa waxaa sii dheer, si loo hubiyo raaxo ku habboon isticmaalka maalinlaha ah ee 4G, sidoo kale waa muhiim inaad ogaato meesha anteenooyinka ay ku yaalliin aag la sheegay. Waxaan hubin karnaa inay wax waliba si hagaagsan ugu socdaan aagagga cufan - agglomerations-ka - halkaas oo ay ku shaqeeyaan dhammaan hawl-wadeennada si fiican loogu aasaasay anteenooyin badan oo guud ahaan bixiya dhammaan soo noqnoqda: wax alla wixii casriga ah iyo hawl wadeenka, waxaan leenahay dammaanad qaad leeyihiin 4G. Laakiin way ku kala duwan tahay meelaha miyiga ah ee ay sida sahalku dhif u yihiin, oo ay dhul badan ku dabooli doonaan. Gaar ahaan tan iyo, mar labaad, dhammaantood ma ahan kuwo la jaan qaada dhammaan heerarka 4G.
Si loo xaqiijiyo goobta hawlwadeennada iyo in la ogaado astaamaha saxda ah ee anteeno kasta, waxaa lagugula talinayaa in la tasho goobo khaas ah sida Antennas Mobilada ou goobjoog ka ahaanta Wakaaladda Kala-wareejinta Qaranka (ANFR) kuwaas oo tilmaamaya khariidadaha isdhaxgalka sida saxda ah ee anteenooyinka loogu talagalay hawlwadeen kasta, iyadoo loo adeegsado soo noqnoqda.
Waxaan arki karnaa inay weli jiraan kala duwanaansho aad u weyn oo kuxiran meesha iyo hawlwadeenka iyadoo kuxiran taleefanka casriga ah ee la adeegsaday, tusaale ah da 'yar ama labo sano ama seddex sano - kaas oo si buuxda ugu heli kara magaalada 4G magaalada laakiin ku dhegan 3G gudaha meelaha qaarkood.
Ugu dambeyntiina, dhowr sano, su’aashu kama soo bixi doonto maxaa yeelay dhulka oo dhan waa in lagu daboolaa 4G - ka dib heshiis dhex maray hawl wadeennada iyo Maamulka Nidaamka Isgaarsiinta Elektaroonigga ah iyo Boostada (Arcep) - iyo dhammaan telefoonada casriga ah ee wareega ayaa maamuli doona shanta xarig ee soo noqnoqda. Laakiin tani wali maahan kiiska, sidaa darteed faa'iidooyinka hubinta iswaafajinta taleefanka gacantu-wadaha ka hor intaadan beddelan moodallada ama baakadaha ...
95% dadku waxay iibsadaan liin noocan oo kale ah halka ay khatar ku noqon karto caafimaadka - SANTE PLUS MAG
Astrology: Astaamaha 5 inta badan astaamaha shucuurta ee zodiac (qalbigoodu hago) - SANTE PLUS MAG